Ngwọta enweghi obi ilu FANUC VISION
Archive si udi "Akwụsịghị"
Fraịde, 08 Mee 2020 by Cristina Maria Sunea
Ihe na-ebugote akwa
Nke a kalama ebutu bin na-enye ndị ọrụ ohere efu akpa, trays & pallets na karama n'ime 2m³ biini. Mgbe ahụ, karama ndị ahụ ji nwayọọ nwayọọ budata na ọnụọgụ nke onye na-enweghị ike ịkọwa ya, na-ezere mkpọchi karama.
Kwesịrị ekwesị maka nnukwu karama, sitere na obere karama gaa rute 5L!
bipụtara Emegaghị emeghe
Akpadoro n'okpuru: karama jam
Wenezde, 19 Mach 2014 by Delta Injinịa
Single isi kalama picker (flex picker)
Onye na-a pickụ karama a bụ ihe a na-ejighị akpọkwa nke na-eji ọhụụ eme ihe na-amata karama na robot maka ijide na ịchekwa karama ndị ahụ. Izere ọkọ na karama!
Ọ nwere ike ijikwa ngwaahịa dị iche iche (site na 50ml ruo 5L) na karama dị iche iche (gburugburu, oval na square).
Ejima isi arapia onye na-aerụ ihe ọ (ụ (ụ
Onye a na - ahọrọ ihe a bụ ọkpọ a na - a bottleụ nke na - eji ọhụụ eme ihe na - amata karama na robot maka ijide na ịchekwa karama ndị ahụ. Izere ọkọ na karama!
Wenezde, Julaị 13, 2016 by Cristina Maria Sunea
Usoro nbudata Pallet
Usoro pallet a na-ebulite igbe nke igbe (pallet), ma jiri nwayọ na-atụ igbe ma ọ bụ na-etinye n'ime mkpanaka nke enweghị akwụkwọ.
Single pallet oyi akwa (tree) ebutu table - kalama unscrambler
Nke a na-ebudata tebụl na-ebupụta trays nke karama / square karama. A na-etinye karama ahụ na trays n’elu eriri igwe. Mgbe ahụ, a na-enye ha nri na eriri ọpụpụ, na -emepụta otu ahịrị karama.
Ugboro abụọ pallet (tray) na-ebudata tebụl - karama unscrambler
Kalama a unscrambler depalletizes trays nke gburugburu / square karama. A na-etinye karama ahụ na trays n’elu eriri igwe. Mgbe ahụ, a na-enye ha nri na eriri ọpụpụ, na -emepụta otu ahịrị karama. Oke kachasị ọsọ: 3000 - 6000 BPH.